प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा बुद्धकृष्णको निरन्तरता » खबरहरुको एउटै केन्द्र
प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा बुद्धकृष्णको निरन्तरता
बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ ०५:५८ मा प्रकाशित !
१७ चैत,भक्तपुर। मध्यपुर थिमिस्थित बोडेको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा यस वर्ष बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेड्ने भएको छ । जात्रा नै रोकिने अवस्था आएपछि बोडेका ४५ वर्षीय बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठ जिब्रो छेड्न तयार भएको हो ।
उनले यसअघि २०६२ देखि २०६५ सालसम्म चारपटक जिब्रो छेडिसकेको छ । २०६६ सालमा घरमा श्रीमती सुत्केरी भएपछि उनले जिब्रो नछेड्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि जुजुभाइ बासँ श्रेष्ठले जिब्रो छेड्दै आइरएको थियो । विगत आठ वर्षदेखि जिब्रो छेड्दै आइरएका जुजुभाइले यसवर्ष घरमा श्रीमती र भाउजू बिरामी भएकाले जिब्रो नछेड्ने घोषणा गरेसँगै जात्राका लागि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिको खोजी सुरु भएको थियो ।
जात्रा नै रोकिने अवस्था आएकाले आफूले पुनः जिब्रो छेड्ने निर्णय लिएको बुद्धकृष्णले बताए । बोडेको जात्रामा बोडेबासीमध्ये पनि यहाँका श्रेष्ठ थरका व्यक्तिले मात्र जिब्रो छेड्नु पर्ने परम्परा रहेको छ । जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले भोजभतेरसमेत गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिले निक्कै सकस पर्ने गरेको बुद्धकृष्ण बताउछ । जात्राका लागि मध्यपुर थिमि नगरपालिका, संस्कृति मन्त्रालय, गुठी संस्थानलगायतले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेका छन । जात्रा प्रत्येक वर्षको वैशाख २ गते बिहान हुने गर्दछ । स्थानीय पाचोबाट सुरु हुने जात्रा बोडेका विभिन्न स्थान र नगरको परिक्रमापछि पुनः पाचोस्थित महालक्ष्मी मन्दिरमा पुगेर समापन हुने गर्दछ ।
PREVIOUS POST Previous post: मुलुक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक- नेता महत​
NEXT POST Next post: म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनेको लर्को
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ ०५:५८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ ०५:५८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ ०५:५८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ ०५:५८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ ०५:५८